धेरै सुन्दर अंतर्दृष्टि मानवता विज्ञान कल्पना लेखकहरूले प्रस्तुत। हामी उदाहरण, हर्बर्ट वेल्स वा जूल्स लागि, सम्झन सक्नुहुन्छ। तर यस लेखमा हामी तिनीहरूलाई बारेमा कुरा छैन। हाम्रो ध्यान ध्यान, "विचार को गन्ध": काम एक सारांश। रबर्ट Sheckley रचनात्मक केही बाहिर यसलाई सिर्जना गरियो।
दृष्टि, सुनेर गन्ध, स्पर्श, स्वाद: मानिस साधारण बाहिरी संसारलाई अन्वेषण गर्न पाँच मुख्य तरिका पहिचान। छैटौं अर्थमा कुरा गर्दा, यो साधारण राम्ररी विकास अंतर्ज्ञान वा टेलिप्याथी Comment मतलब आएको छ। त्यहाँ साँच्चै गर्ने मन पढ्न सक्नुहुन्छ ती हुन्? यो यस्तो अज्ञात कारण, यो मुद्दा ध्यान धेरै दिइएको छ रूपमा, सोभियत पटक, मा भन्न गाह्रो छ, र एक एक साँचो मानसिक हाम्रो देश को खुला रिक्त स्थान मा पाउन सक्षम थियो जस्तो देखिन्छ। यो, को पाठ्यक्रम, Nelly Kulagin बारेमा।
बाँकी, यो "एक रहस्य हो।" उसलाई यति स्वेच्छाले लेखकहरूले (विशेष गरी लेखकहरूले विज्ञान कथा को विधामा काम गर्ने) उतरदायित्व लिनु लागि किन र छ। रबर्ट Sheckley आफ्नो ध्यान यसलाई छल्न सकेन।
यसलाई क्लासिक कस्मिक इतिहासको रूपमा, सुरु हुन्छ। तारा हुलाकी, एक ग्रह देखि अर्को चल्छ अचानक आफ्नो जहाज पहिले नै साह्रै पुरानो थियो discovers, अविश्वसनीय गति संग गरम छ। उहाँले एक मुसा Smells र इन्धन संग ट्यांक जाँच गर्न जान्छ। यो गर्मी इन्धन SPOILED कि बाहिर जान्छ। Leroy Clive (पायलट) उहाँले निकटतम ग्रह oxygenated मा जमीन छैन भने, अस्तित्व को संभावना छैन थियो कि बुझ्नुहुन्छ। उहाँले रेडियो आफ्ना मालिक, साथै सम्भावित दुर्घटना को निर्देशांक के बताउँछ। Postmaster पायलट calms र उहाँलाई लागि उद्धार टोली पठाउने भन्छन्। पछि pochtolet ग्रह डब्ल्यू-एम-22 मा आपतकालीन अवतरण बनाउँछ।
रोमाञ्चक सुरु "विचार को गंध" (सारांश, हामी षड्यन्त्र राख्न आशा, सकेसम्म लामो समयसम्म)। अझै पनि एक हुन जाँदै छैन।
स्वाभाविक, नायक एक बाध्य अवतरण बनाउँछ, त्यो तुरुन्त होश र एक समय चेतना हराएको लागि आउन भएन। म यसलाई संग भाग्यो को प्रोटिन नजिकै के बाट उठेँ, तर पशु अनौठो देखिन्थ्यो: उहाँले आँखा र कान छैन, र बाल एक greenish रङ्ग थियो। यो ब्वाँसो देखिन्थ्यो पछि। "ग्रे" छैन सुनेपछि र दृष्टि। एक रहस्य - जनावर को कसरी संसारको नेभिगेट गर्न। र Clive एक शिकार दृश्य देख्यो: लोखर्के टाढा चलिरहेको वा लुकाउने, र ब्वाँसो उनको को एडी मा थियो। केही समय को लागि predator हुनत सिकार उहाँलाई अर्को थियो, निशान बन्द बरालिएकाहरूप्रति, तर यदि, त्यसपछि पत्ता र खाएको उहाँले यो गुमाए छन्। तर प्रोटिन स्पष्ट ब्वाँसो है भोक पूरा गर्न असमर्थ छ, र त्यो हुलाकी गर्न लगभग बस्न गए। उहाँले smelled कसरी बुझ्न गाह्रो छ। Clive पनि फेरि चेतना हराएको रूपमा uspugatsya समय छैन। Zest Sheckley कथा "विचार को गंध" (सारांश यो देखाउँछ) भर्खरै यी रहस्यमय जनावर रूपमा।
म एउटै साँझ वरिपरि आए। Clive सुत्न, जहाज को मात्र होइन पतन, तर पनि शिकार दृश्य देखिन्थ्यो, त्यसपछि उहाँले समय बारे छक्क परे यी पशुहरू कुनै आँखा, कुनै कान, तिनीहरूले प्रत्येक अन्य ट्र्याक कसरी।
विचार मा यो ब्रश मा लुकाउने, ग्रह केही अन्य बासिन्दाहरूले विचलित थियो, त्यो एक कालो चितुवा जस्तो, तर उपस्थिति मा चिरपरिचित लागत संग। जबकि Clive अमूर्त विचार दिइएको थियो, कुनै कान र आँखाले ठूलो कालो बिरालो पृष्ठभूमिमा वातावरण देखि एक व्यक्ति भेद गर्न सकिएन, तर बित्तिकै त्यो बारेमा विचार को रूप मा, predator एक पटक उहाँलाई चासो विषय देखाए।
", पशु telepaths" पाठ्यक्रम ": र त्यसपछि नायक dawned!। त्यसपछि उहाँले फेरि एक बनाएको जंगली बिरालो विचार को वस्तु, र फेरि त्यो "sensed" उहाँलाई। यी प्रयोग कुनै राम्रो गर्न ल्याउनेछ भनेर साकार, उहाँले आफ्नो विचार छालहरू संग predator बन्द फेंक गर्न खोजे। Clive दुर्भाग्यवश, छैन, सबै समय फिर्ता शब्द "Panther" जा सक्छ, अरू केही विचार गर्न प्रयास गर्नुभयो, तर। अत्यन्तै आविष्कारशील कथा लिखित रबर्ट Shekli। "विचार को गन्ध" (यो एक सारांश) ब्याज संग, तर पनि खुशी साथ मात्र हामीलाई द्वारा मानिन्छ।
मानसिक महिला Panther हुन बहाना: अन्ततः Leroy विचार गर्यो। पुरुष विश्वास र काल्पनिक courting थाले "सानो केटी।" त्यसपछि, स्पष्ट उहाँले धोका भएको थियो भनेर बुझे र चिल्ला भागे। कथा, रोबर्टा Shekli "विचार को गन्ध" को पनि एक सारांश Captivates। लेखक masterfully प्लट बनाउँछन्।
को ब्वाँसा संग लड्न
को Panthers सुतेको Leroy आफ्नो साहसिक पछि। मात्र म अर्को बिहान जगाए र फेला: आफ्नो हवाई वाहन पूर्ण जलाए, तर उहाँले जीवित छ। जो अझै पनि एक हतियार रूपमा amiss सकिनँ, जहाज को भाग - उहाँले छानिएन एक धातु पट्टी। र अझै हुलाकी ग्रह को कामकाज को आधारभूत सिद्धान्तहरू बुझ्न गर्दा, यो बाँच्न अलि सजिलो थियो, तर सबैभन्दा रोचक कुरा आउन थियो। को Panthers Cleve पछि ब्वाँसा भ्रमण गर्नुभएको थियो। यो रबर्ट Sheckley को घटना वर्णन गर्दछ। "विचार को गन्ध" (पछि प्रकट गर्न यो प्रयास एक सारांश) अति गतिशील काम हो।
उहाँले खाना र पानी फेला परेन। पशु देख्न सकेनन्, तर उहाँले लाग्यो "शायद आज म ब्वाँसो वा ब्वाँसा संग बैठक हुनेछ" र तिनीहरू जादुई देखियो। अर्को शब्दमा, विचार सामाग्री छ - कि उत्पादन को सारांश मा "माउन्ट" छ जो आधारभूत विचार, छ "विचार को गंध।" यो Sheckley मा ऊंचाई मा कार्यान्वयन र - अवश्य, यो एकदम banal छ, तर कल्पना मा मुख्य कुरा।
नायक तुरुन्तै तिनीहरूलाई पकड आउन छैन, उहाँले पहिलो उहाँले फेला परेन जब आश्रय पाउन खोजे, तर पनि मानिन्छ युद्धमा vultures circling को ठाँउ, कि केही गर्न बुझे कि फेला - यो लडाई लिन आवश्यक छ।
सुरुमा उहाँले मानसिक ब्वाँसो, हुन दया र विरोधीहरूले मा दबाव राख्न तिनीहरूलाई outwit गर्न प्रयास pretended। यो पनि काम भएन: उहाँलाई सामना उभिए गर्नेहरूलाई शिकारीहरु, को प्रचार विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ, तर ब्वाँसो नायक पछाडिको आए र यो छवि देखि "दस्तक", भाग्यो। खैर, एक "खैरो" Clive चोट थियो।
त्यसपछि Leroy एक ब्वाँसो संग काम छोडेर यस्ता Panthers रूपमा थप शक्तिशाली जनावर गठन गर्ने गरियो। उहाँले व्यावहारिक, धेरै राम्रो खेले, तर विरोधीको सजिलै आत्मसमर्पण गर्न जाँदै छैन। तिनीहरूले बाँध्न बन्द र (वहाँ चार थिए) सँगै उसलाई सबै हतारिएको।
कालो चितुवा र सर्प
उहाँले क्रोधोन्मत्तता में उहाँले ब्वाँसा पिटे कसरी, त्यसपछि यो मलाई dawned छक्क परे: "! साँप"। साँच्चै, जनावर डरा थिए, तर अब हुलाकी भूमिका पूरा भएन। रूपमा चाँडै ब्वाँसा आफ्नो पकड eased रूपमा उहाँले भागे।
तथापि, टाढा छैन टाढा, यो समात्नु र "नर्स वन", र vultures। त्यसैले उसले अन्तरिक्ष यात्री को अनुभव प्रयोग गर्न निर्णय - चरा आफूलाई प्रस्तुत गरे। यो भोक ब्वाँसा भ्रमित ढकढक्याउन, र तिनीहरूले यो गुमाए। उहाँले रबर्ट Sheckley छविहरू एक उत्तराधिकारी उहाँको नायक जान्छ। (सारांश समावेश) "विचार को गन्ध" कार्य रोमाञ्चक मा उत्तेजित गर्दछ।
अन्तिम लडाई। ब्वाँसा, Panthers, vultures
बिहान, उहाँले एक सानो साहसिक थी भने, Leroy कालो चितुवा र ब्वाँसाहरू को लाग्यो। तिनीहरूले दुई पटक सोध्न लामो थिएनन्, त्यसपछि देखा परे। कि नायक पर्याप्त निद्रा प्राप्त गर्दैन दिइएको उहाँले बुझे एक पटक उहाँले सामना गर्न सकेन मा एक कालो चितुवा र ब्वाँसाहरू संग। Clive बेकारी र जनावर लागि धेरै स्वादिष्ट कुरा कल्पना गरेको थियो। उनको टाउको बुश को केवल एक छवि आए रूपमा, र उहाँले तिनीहरूलाई भयो।
एक समय को लागि यो पर्याप्त थियो, तर त्यसपछि कठफोडवा आए र उहाँ आफ्नो पेट कीडे मा लुकाइन् भने व्यक्ति कुटपिट गर्न थाले। Leroy फेरि भाग्य बाहिर, उहाँले सिकारीहरूबाट भाग्न बाटो बाहिर प्राप्त र फेरि थियो, त्यसपछि, तिनीहरूले लगभग उसलाई पक्रेको गर्दा उसले आफूलाई मृत प्रस्तुत, र यो उहाँको सुरक्षित गरियो। के भइरहेको थियो साकार, Clive आफ्नो उमेर लास, अर्थात् थप्न थाले उहाँबाट putrefaction को बलियो गन्ध थियो। Panthers र ब्वाँसा नायक उहाँबाट टाढा गरिएका, तर vultures, त्यसको विपरीत, आकर्षित। र फेरि छाला परिवर्तन गर्न समय छ। वास्तवमा Sheckley काम अन्तिम दृश्य को विवरण निम्न छ, त्यो कहानी, एक सारांश पहनाया छ "विचार को गन्ध।"
त्यसपछि एक स्पेस पायलट आगो र लगभग सबै जीवित कुराहरू उहाँलाई भय सम्झना। उहाँले एक टर्च रूपमा आफूलाई कल्पना। पशु भागे। एक उद्धार spaceship बस समयमा आइपुगे। Leroy अनजानमा बोर्ड मा आफूलाई फेला परेन। उहाँले एक भयानक आगोको बीचमा थियो किनभने उहाँलाई पछि उड्यो गर्ने मुख्य,, Cleve भाग्यशाली बताए। तिनीहरूले उतरा जब चालक समयमा ग्रह को सतह मा आगो हेर्नुभयो। तर, Leroy ग्रह बायाँ गर्दा, भू-भाग तत्व revelry कुनै पनि निशान छोड्न भएन, छैन आफ्नो अधीनस्थ को शरीर मा हेड र बल्न फेला परेन।
चालू यस retelling काम रोबर्टा Shekli "विचार को गंध।" एक निकै छोटो सारांश, सायद हाम्रो बलियो बिन्दु, तर पाठक कहानी को प्रतिनिधित्व volumetric हुनेछ।
एक असामान्य मानिसको सामान्य भाग्य। स्टीफन राजा द्वारा "मरेको क्षेत्र" को seer
र अझै अन्त मा म मन पढाइ जस्ता क्षमता को ambivalence बारेमा थोडा कुरा गर्न चाहन्छु। यो कि टेलिप्याथी Comment विश्वास छ - यो शक्ति हुन्छ किनभने भीड देखि बाहिर खडा यसलाई, मिडिया लागि राम्रो।
वास्तवमा, वास्तविक psychics को कथा आनन्द तिनीहरूले पहिले नै जीवनमा धेरै थाह छ। र पनि छैन किनभने मानिसहरू खुला पुस्तक जस्तै, पढ्न, तर तिनीहरूले बुद्धि एजेन्सीहरू र साधारण नागरिकहरु, आफ्नै उद्देश्यका लागि आफ्नो उपहार प्रयोग गर्न चाहन्थे जो Hunted किनभने।
स्टीफन राजा यो टेलिप्याथी Comment छैन, तर एक दूरदर्शी को, एक उपन्यास "मृत क्षेत्र" छ। तर, एक असाधारण मानिस यो भाग्य साहसी पर्याप्त प्रस्तुत गरिएको छ। आफ्नो उपहार, उहाँले आफ्नो बुबा, सुखी परिवार मानिसको भविष्य भुक्तान संभवतः। यसको वेदीमा Dzhonni Smit उहाँले थियो सबै राखे। सुरुमा उहाँले भविष्यमा देखेर मानिसहरू श्राप छोएर उपहार लाग्यो। रूपमा प्रोभिडेन्स उहाँले शक्ति हिटलर को दोस्रो आगमनलाई रोक्न रोक्न थियो ती यसलाई सामना छैन त्यस्तो समय सम्म थिएन।
र अन्त मा, नायक यसको मिसन र उद्देश्य को कार्यन्वयनका लागि आफ्नो जीवन संग दिन्छिन्। अर्को शब्दमा, कुनै पनि उपहार (लेखक वा अलौकिक) मात्र होइन एक निश्चित क्षमता, तर पनि एक विशाल जिम्मेवारी implies।
गोर्की "Makar Chudra": काम सारांश
को pianist गर्ने हो? विश्लेषण Kuprin कथा "टेपर"
"गारनेट Bracelet": Kuprin काममा प्रेमको विषय। उत्पादन "गारनेट Bracelet" मा लेखन: प्रेमको विषय
त्यो समय एक विभाजित सिस्टम को स्थापना कसरी ठूलो बनेको छ
अभिनेता सर्गेई Zhigunov: Filmography, जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
लेटी पत्तिहरू कसरी उपयोगी हुन्छन्
आफ्नै हातमा: कसरी सुट Maleficent बनाउने?
Dagestan को राजधानी: आकर्षण, मस्जिदों, थिएटर मखाचकला। रूस को नक्सामा मखाचकला शहर कहाँ छ?
इतिहास मा सबै भन्दा प्रसिद्ध कलाकार को9जोडी